Kofi Flan - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Kudya255 maminitsi8 vanhu400 makarori
kubudikidza Silvia Benito
Ndakaedza dessert iyi kekutanga kumba kwamainini Vicen tichidya semhuri. Iyo iri nyore kwazvo flan kugadzirira, isingasviki chikamu chechina cheawa takagadzirira dessert inonaka, kunyanya ye. vanoda kofi.
Iro resipi rakambogadzirwa rinoda maawa mashoma ekutonhora kuti rigadzikane zvakanaka. Kunyangwe ini ndichida kuzviita manheru ndozvitora zuva rinotevera. Izvo zvakakoshawo kune gadza zvakanaka iyo flan, kuti hamvuropu yehumambo flan iyo yatinowedzera i8 servings, kana iri 6 isu tinomhanyisa njodzi yekuti haizopete.
Izvo zvine iko kubata kofi iyo yakanakira mushure mekudya kana sechikafu. Sezvo ndiri zino rinotapira, ndakawedzera zvishoma shuga kupfuura yakaratidzwa namainini, asi izvo zvinotopinda mumanakiro.
Mumba mangu, kana ndikakuudza chokwadi, hatisi varimi vekofi. Nyangwe murume wangu asina kundinzwa ndichakuudza kuti anoenderera mberi neColacao® yake, asi tese takaifarira flan zvakanyanya, nyangwe hongu, kune vasiri kurima kofi ndinokupa zano. perekedza nekirimu.
Kofi inogona kuva soluble kana kofi inogadzira, iyo iwe yaunogara uchiita. Asi kana iwe ukagadzira kofi yakasungunuka, iwe unofanirwa kunge wakaisanganisa nemvura muchikamu chakaratidzwa nemugadziri
1 Kofi flan
Iyi flan iri nyore dhizeti iyo iwe yaunogona kugadzira zuva rakapfuura.
Imba yekicheni: tradicional
Recipe mhando: dhizeti
Nguva yekugadzirira: 4:3 p.m.
Kubika nguva: 12M
Nguva yakazara: 4:15 p.m.
500 g yekurova kirimu ine 35% mafuta
50 g yekofi
Envelopu imwe yehumambo flan ye1 servings
Liquid candy ye mold (ona recipe)
Chekutanga pane zvese isu tinoisa iyo caramel yemvura muforoma uye chengetedza.
Isu tinowedzera izvo zvese zvinosara uye chirongwa Maminitsi mashanu, tembiricha 12º, kumhanya 90.
Kana tapedza, tinodurura musanganiswa mu caramelized mold uye tiite kuti itonhorere kuisa mufiriji kwemaawa matatu kana mana.
Kana tichishuvira tinogona kuishumira ichiperekedzwa nekamu cream.
Mamwe mashoko - Kofi dalky
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Nyore, Desserts
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Desserts » Kofi flan
Ndeupi wepakati iro girazi rekofi, rakakura kana rakatemwa?
Pindura kuna conchi
Mhoroi, ini ndoda kuziva kana kofi inofanirwa kuve chinhu chakakosha chinhu kana chingave chimwe chakadai? mazano? hahaha hatidi coffeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Pindura kune ary_21_@hotmail.com
Silvia Benito akadaro
Ini handina kuyedza mamwe marudzi ekofi, asi ivo vanotiudza kuti kune avo vanoigadzira necola-cao kana nesquik uye kuti yakanaka kwazvo.
Imwe pfungwa ndeyekuedza iyi kofi yechinguvana yavanotengesa yakavhenganiswa ne caramel kana vanilla kana cappuccino ... pamwe kune avo vasiri varimi vekofi vakadaro.
Pindura Silvia Benito
Conchi, ini ndashandisa chiyero chemukombe wepurasitiki pachivharo cheiyo thermomix, ndine hurombo nekusainyatso tsanangura.
Mhoro Silvia, inguva yekutanga kutaura mazwi, asi haazove ekupedzisira, ndatenda kwauri handimise Thermomix, zvinoshamisa, nezuro ndakaita mumaminetsi mashoma iyo cream flan yawakaburitsa rimwe zuva uye ndauya naro kuhofisi, vanhu vakafungidzira vachifunga nezvenguva yaizotora kuti iigadzire uye kuti inonaka sei, ndanga ndichiseka mukati, maminetsi mashoma uye inonaka !, uye saizvozvo, maresipi anouya kwandiri kubva kuwebsite yako, ndinokutendai nezvese uye nekugovana nesu zvese zvakavanzika zveThermomix. Kutsvoda, Cris
Mayra Fernandez Joglar akadaro
Chinhu chimwe chete ichocho chinoitika kwandiri, mazhinji acho mabikirwo anoitwa munguva shoma pane yetsika nzira. Uye neiyo Thermomix ivo vakakwana !!
Pindura Mayra Fernández Joglar
Cristina, ndinokutenda zvikuru nekutaura kwako uye nekutevera mabikirwo edu. Ndiri kufara kuti iwe unonakidzwa nazvo uye unogovana nazvo nevanhu vako, uchifarira kuziva pachako shingairo iyo dzimwe nguva inogadzira aya mabikirwo
Nuria CC akadaro
Ini ndinowanzo gadzira iyi flan futi, inonaka kwazvo, asi ini handidi kofi futi uye ndinoigadzira necola cao kana nesquik chero chandinacho pamba, ndinoisa girazi remukaka pairi uye kuwedzera nesquik kusvikira yaita kwasviba.
Pindura kuNuria CC
Ndatenda nemupiro wako Nuria, shuwa kuti avo vasiri varimi vekofi vanouya zvakanaka !!
Hamvuropu yeFlan ine magiramu mangani? Ini ndine bhokisi asi harisi kuisa zvikamu, rinoti 97,5 gramu ,,, chinyararire thanks for your recipes ndinoita dzinenge dzese
Unofanirwa kuwedzera shuga? Maemvuropu ehumambo uye ine shuga, handiti?
unofanirwa kuwedzera shuga shoma kuitira kuti uve neflan nyoro. Unogona zvakare kudzikisa kubva pa150 kusvika pa100 g kana kushandisa imwe mhando yezvinotapira isiri shuga asi ini ndinowedzera chimwe chinhu kwazviri nekuti zvikasadaro iyo tambo yakasimba inogona kukanganisa dhizeti yako.
Mhoro Silvia, mubvunzo wandinawo… munoita sei chigumbuso ichi?
Veronica, ndinoigadzira mune yechinyakare keke muforoma ine buri pakati.
Iyi flan yakanaka !!!!!!! Pupurira.
Ini handisi mugadziri wekofi, asi ndinoida. Ini ndinogara ndichiiperekedza nekamurove kadiki.Iinopa kubata kwakanaka kwazvo.
Kunyangwe vana vangu vanozvifarira hehe!
Mufananidzo wacho waive wakanaka, senge vese.
Delfi, ndinofara kuti unoifarira, uye sezvaunotaura kuti kubata kwekirimu kunokosha mumba mangu, tinochida.
Kutaridzika kwakanaka zvakadii !!!!,
Ini ndakakuwana munguva pfupi yapfuura, asi ini ndoda ako mabikirwo. Makorokoto !!!!!.
Pindura kuna Elena22
Elena, tinogamuchirwa kublog, ndinofara kuti unofarira mabikirwo edu.
Mhoroi, ndatenda maresipi, ini ndinowanzo tora ese anonaka kwazvo, kunze kweiyo yakawanda inonaka kofi flan, asi handizive zvandakaita izvo zvisina kudzora
kutsvoda uye ndinokutendai zvikuru kune zvese
marilo jimenez akadaro
Mhoroi, nhasi ndatora nzira yekubika kuti ndiigadzire uye mubvunzo unotevera wamuka,
Kofi poda kana kunyungudutswa mumvura?
Pindura kuna marilo jimenez
ANGELICA MARTINEZ akadaro
Mhoroi, Mariló neni tine mubvunzo mumwe chete, asi patova nemazuva gumi kubvira patakabvunza,
Iyo poda yekofi kana yakanyungudutswa nemvura? Isu tinoda kugadzira iyo flan, unogona here kupindura munguva pfupi ndapota?
Pindura ANGELICA MARTINEZ
Mhoro Mariló naAngelica,
Iyo kofi yakatonyungudika mumvura, kunge uchazoimwa!
Izvi zvakanaka, ndinofanira kugadzira cola cao .. Ndinoda kuziva kuti carmel inogadzirwa sei mu thermomix… maita mabikirwo acho….
Pindura kuna MARIYA
Mary, isu tine iyo caramel recipe pane iyo blog. Tarisa icho kumusoro muindekisi.
Irene Arcas akadaro
Mhoro Cristina, iwe haudi iyo curd nekuti ine iyo mapoda kugadzira flan uye izvo zvinoita kuti ive curdle.
Pindura Irene Arcas
Mhoroi, ndaita iyi flan nhasi mangwana ... uye yanga ichinyanya kutapira.
Ndaisa girazi reiyi kofi yakasungunuka nocilla ... uye handizive kana ndosaka!
Izvo zvakanaka ... pro yeyangu inotapira kuravira!
kutsvoda uye ndokumbira utiudze kuti yakawanda sei kofi uye kana ichifanira kunge yakanyungudika kana kofi.
Mhoro Kennyxsylver, chiyero chegirazi chinobva kune Thermomix beaker, ivo vanga vataura nezvazvo zvishoma kumberi pasi mune zvakataurwa.
Parizvino isu tinoshandura izvi mune zvinongedzo kuitira kuti pasave nenzvimbo yekusahadzika.
Kofi inogona kuve izvo zvaunodya kumba. Unogona kuigadzira yakasanganiswa nemvura kana kubva muhari yekofi.
Kana kuri kutapira kwacho, handifunge kuti imhaka yekofi, asi nekuda kweiyo envelopu yeflan.Wakaona here kuti yaive yatove neshuga? Izvo ndezvekuti dzimwe nguva vanovatengesa neshuga yakabatanidzwa, saka chokwadika, kana tikawedzera iyo 150 gramu yeshuga kune iyo uye isu hatisi kutapira ... tinokwira madziro !!
Kutenda nekutinyorera uye nekutitevera. Iwe uchaona maitiro auchazvimonera parinotevera. Shuwiro yakanakisa!
Maria Jose akadaro
Mhoroi, iyi flan "yakanaka", pachinzvimbo chekuisa kofi kubva mugadziri wekofi ndakaisa akati wandei maspuni e nescafé uye yakanaka !!!!!!
Pindura Mª José
Zvakanaka sei kuti waifarira MªJosé!. Ichokwadi ndechekuti inonaka kwazvo ...
Maita basa nekuvimba kwedu mabikirwo uye nekutinyorera.
Mhoro Silvia. Ndakazviita mangwanani ano asi ndakanda hafu yehamvuropu nekuti. Handina kuona recipe yako, mukoma wangu akandipa, uyo aive ne1 litre yekrimu uye hamvuropu yehumambo uye ini, sezvandakaita 500 hafu yelita, ndakazviita pakati, ngatitarisire kuti yakamonyoroka.
Mhoroi, ini ndango gadzira iyo flan ini ndachinja kofi ye caramel yakavhenganiswa cappuccino. Uye hwema hwehuipi sekutaura kwevana vangu. Asi ini ndinoona iri diki diki yandinoita kuitira kuti inotevera iwedzere.
Pindura kuna laly
Hi Laly, unogona kuwedzera zvirinyore mari yacho sezvaunoda (zvakanaka, 😛 chenjera kuti iyo thermomix inokwana 2L). Kana iwe ukawedzera izvo zvinoshandiswa kune tembiricha yemukamuri, handifunge kuti unofanirwa kuwedzera nguva dzekubika. Zvisinei, kana iwe uchibika iyo, ive shuwa kuti inosvika 90 degrees zvakanaka. Rombo rakanaka uye ndatenda neshoko rako !! Iwe uchatitaurira kuti inotaridzika sei pauri ... chokwadi kuva mukuru. Kutsvoda.
Yaive kufira iyo, ine inonaka caramel kuravira. Inotevera nguva ini ndichazviita nerita
Yakanaka Laly !! Ndeapi mashoko akanaka. Ndinokutendai zvikuru nekutitevera uye nekutisiira iyi meseji. Kutsvoda 🙂
Sandra Herrera akadaro
Ndine soooooo akanaka! Kwakave kubudirira !!
Pindura kuna Sandra Herrera
Ini ndoda kuziva kuti yakawanda sei mvura yekofi uye kana mukaka usingadiwe?
Pindura kuna cristina
Ana Valdes akadaro
Hi Cristina, haudi mukaka. Handikwanise kukuudza kuti yakawanda sei mvura yekofi. Iwe unoda kapu izere nekofi yakagadzirira. Kuwanda kwemvura kunoenderana nekofi yako inogadzira. Uye kana ukaishandisa, unoteedzera rairo yemugadziri kugadzira kofi uye, kana yagadzirwa, unoda mukombe uzere. Ndinovimba ndabatsira! Kumbundira!
Pindura Ana Valdés
Jo !! Ini ndaita zvese sezvazviri uye yanga iri super mvura pandinoiisa muforoma, ini handizive kuti ichatsemuka! Ini handizive kuti nei uye chii chandakatadza uye kana iine mhinduro
Vegan marzipan mabhora
Red berry dessert yeKisimusi